Ukulondoloza iWebhu ye-WordPress Website - Isikhokelo Esivela kwi-Semalt
Iindawo ezininzi ze-e-commerce zisekwe kwi-WordPress. Abantu abahlukileyo bayazibuza umphumoukuqhuba ii-hacks ezahlukahlukeneyo ezinokuthi zifike kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo zeWebPress. Ngokuthobeka, intanethi igcwele abantu bonkeiintlobo zezenzo ezinobungozi. Ukusuka kwi-spamming ukuze udibanise, kucacile ukuba abahlaseli banokukujolisa kwiwebhusayithi yakho baze bafeze abanye babo ububiizenzo zentshukumo - data protection and recovery in Portland. Ngokuqhelekileyo, abagculeli bazenza njengabantu abanomdla kwi-SEO yokunyusa okanye elinye iqela osebenzayo.Esikhundleni salokho, ziphelela ekusebenzeni ezinye zeentsimbi ezinkulu.
Iingxowa eziqhelekileyo zingabandakanya i-cross-scripting (XSS), ukukhwabanisa, ukuba umntuulwazi kunye nokutshintshwa kobuqhetseba. Abantu abaninzi baye bathatha iidizi zeenkcukacha zekhadi lesikweletu kubaxhasi kuphela ukuba bahambe benzeukudluliselwa emva kwabo. Kwezinye iimeko, banokuzisa i-website kwaye babingelela abantu ngezinto ezihlekisayo kwiakhawunti yabo yomsebenzisi.Ngenxa yoko, ukhuseleko lwewebhusayithi yakho ye-WordPress kunye neyakho yabaxumi bakho kuxhomekeke kakhulu kwiindlela oqaphele ngazoukugcina aba bahlaseli.
I-Artem Abgarian, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo kuMpumelelo iSemalt IiNkonzo zeDivithali, zibonisa ezinye zeengcungcuthe zokungqineka, ezinokuthi zikhusele iwebhusayithi yakho ngokuchasene nabaculi:
1. Sebenzisa iphepha lokungena elikhuselekileyo.
Iphepha lokungena kwi-WordPress lisoloko likhuselekile. Yei-hacker efanelekileyo, kunokwenzeka ukuba wenze ngobuqhetseba indlela yakho kwiziko lewebhu kwiwebhusayithi ethile. Xa wenza kwakhoI-WordPress site, kubalulekile ukuqwalasela ukongeza i-wp-login..php okanye / wp-admin / kwiwebhsayithi yewebhu oyifumanayo. Lo mlinganiselo unakokuthintela lolu hlobo lokungena kunye nezinye izihlaselo ezincinci. Ukusebenzisa iiphasiwedi ezikhuselekileyo kunokukunceda kwakhona ipaneli yokulawula yesayithi yakho iphezulukhu seleko. Ngenxa yoko, gwema amaphasiwedi aqhelekileyo afana ne-12345 okanye iphasiwedi elula ukuqagela.
2. Bhalisa idatha usebenzisa i-SSL.
Olu luhlu lwezokhuseleko luqinisekisa ukuba utshintshiselwanoIdatha phakathi kwesiphequluli kwaye iseva ikhuselekile. Ngenxa yoko, i-hacker ingaba nzima ukukhupha ulwazi olukhoyo kwi-database.Esikhundleni sokuba namagama kunye nenani, i-hacker idibana nekhowudi.
3. Nika amandla ukuqinisekiswa kwe-2-factor.
Enye yeendlela zokuqinisekisa ukhuseleko lwakhoabaxhasi ngaba 2fa. Abanye abacebisi abaphumelelayo baphela ngokufumana amaphasiwedi kwiakhawunti ezininzi. Nangona kunjalo, ukuqinisekiswa kwe-2-factorkongeza omnye umgca wokukhusela kwi-equation. Ngenxa yoko, iphasiwedi ngokwayo ayanele. Ikhowudi eyenziwe ngumsebenzisi kufuneka ifumanekeukusuka kumyalezo wesicatshulwa weselula, onokuthi awukwazi ukwazisa umnqwenga.
Abahlaseli baqulunqa isiseko sezona zininzi zolwaphulo-mthetho olujongene noluntu lwethu namhlanje. Nonkeukuthengiswa kwe-intanethi kukuxhomekeke kwinkqubo ye-hack okanye umsebenzi we-scam. Kubalulekile kwiprogram yewebhusayithi ukuqinisekisa ukuba iindlela zeukukhuselwa kwabahlaseli kufuneka baqaphele kunye nokuqinisekisa ukuba bahlala bekhuselekile kulezi zihlaselo. Ukhuseleko lwe-e-yorhwebo yakhoIwebhusayithi isezandleni zakho. Esi sikhokelo sibonelela ngeendlela zokunqongophala, ezinokunyusa ukhuseleko lwesiza sakho. Kwezinye iimeko,ukukhusela iwebhusayithi yakho ngokubhekiselele kubahlaseli banokuqiniseka ukuba iinjongo zakho zokusesha injini (SEO) zithwala iziqhamo njengoko i-Google ayiyi kubhalaindawo yakho njengenqabiseko.